အ​သဲ​ပုံ​စံ ​နှင့် ​အ​သဲ​ပုံ​စံ social widgets ​လေး​ပါ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​အ​သဲ​ပုံ​စံ ​နှင့် ​အ​သဲ​ပုံ​စံ social widgets ​လေး​ပါ
​အောင်​မြင်​ရင်​တော့ Comment ​လက်​ဆောင်​ထား​ခဲ့​ပေါ့​နော်
►2. Template ​ကို​သွား​ပါ
►3. Edit HTML ​နှိပ်​ပြီး ​ဖွင့်​လိုက်​ပါ.... ►4. CTRL+F ​ကို​နှိတ် ​ပါ ​အောက်​က ​ဘား​လေး​တတ်​လာ​မယ်
►5. </head>​ထည့်​ပြီး​အန်း​တား​ခေါက်​ပါ</head> ​တွေ့​ရင် ​အ​ပေါ် ​က​နေ ​ထည့်​လိုက် ​ပါ
►6. CTRL+F ​ခေါ်​ထား​တဲ့ ​ထဲ​မှာ </body> ​ထက်​ရှာ​တွေ့​ရင်
</body> ​အ​ပေါ်​က​နေ ​ထည့်​ပြီး SAVE ​ပါ ok ​သွား ​ပါ​ပြီး